National Power News:: गुरुकुलका गुरुको यस्तो अन्तरवार्ता ! ( भिडियो अन्तरवार्ता सहित) National Power News:: गुरुकुलका गुरुको यस्तो अन्तरवार्ता ! ( भिडियो अन्तरवार्ता सहित)
गुरुकुलका गुरुको यस्तो अन्तरवार्ता ! ( भिडियो अन्तरवार्ता सहित)
१८ बैशाख, काठमाडौँ – गुरुकुलका गुरु सुनिल पोखरेलको एउटा अन्तरवार्ता अहिले निकै नै चर्चामा रहेको छ । पत्रकार अर्जुन राजले नाट्य क्षेत्रका यी गुरुसंग उनको जीवनको अन्तरङग र उनको कार्यक्षेत्रको बारेमा बुझ्ने अभिप्रायले अन्तरवार्ता लिएका थिए । तर निकै अस्वभाविक रुपमा प्रस्तुत भएका यी गुरुले पत्रकारले सोधेका हरेक प्रश्नलाइ निकै असहज र असभ्य तरिकाले उत्तर दिएका थिए ।
निकै फ्रस्टेट देखिएका पोखरेल नशामा पनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । सायद नाट्य क्षेत्रमा उनको योगदानको कदर नहुनु र पछिल्लो समय राज्यको तर्फबाट गरिएका वाचा पुरा नभएकोले पनि पोखरेलले यो अस्वभाविक व्यावहार देखाएका हुन सक्छन् ।
पत्रकार अर्जुन राजले यो अन्तरवार्तालाइ आफ्नो जीनवकै सबैभन्दा झुर अन्तरवार्ता भनी टिप्पणी गरेका छन् ।